ठग कम्पनीका मालिक एफएनसीसीआइको बरिष्ट उपाध्यक्ष निर्वाचित ! यस्तो छ गोल्छा समूहको 'लुट' कहानी
ARCHIVE, OFF THE BEAT, SPECIAL » ठग कम्पनीका मालिक एफएनसीसीआइको बरिष्ट उपाध्यक्ष निर्वाचित ! यस्तो छ गोल्छा समूहको 'लुट' कहानी
काठमाडौँ - कालोबजारी ऐन विपरित मोटरसाइकलहरु बेचेर जनता ठग्न पल्किएको 'ठग' कम्पनी बजाजका मालिक शेखर गोल्छा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका बरिष्ट उपाध्यक्ष निर्वाचित भएका छन् । महासंघको नयाँ नेतृत्वका लागि मंगलबार भएको चुनावबाट गोल्छा उपाध्यक्षमा निर्वाचित भएका हुन् । उनका प्रतिद्वन्द्वी किशोर प्रधानले गोल्छालाई माला लगाएर बधाई दिएका छन् ।
यता अर्को बर्ष ठग कम्पनीका यी मालिक नै महासंघका अध्यक्ष हुनेछन् । यस बर्षबाट महासंघको विधान संशोधन गरेर बरिष्ठ उपाध्यक्षनै अध्यक्ष हुने ब्यवस्था राखिएकोपछी कानुनको धज्जी उडाउदै जनता लुटिरहेको कम्पनीका यी मालिक एफएनसीसीआइका अध्यक्ष बन्नेछन् । यसले नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघपनि फोहोरी राजनीतिको चंगुलमा परेको र ठगहरुले देशको गौरवशाली संस्थाको नतृत्व गरेर विधिको शासनकै उपहास भएको सरोकारवालाहरुको तर्क छ ।
यता जिल्ला तथा नगरको उपाध्यक्षमा प्रधान समुहका प्रमोद श्रेष्ठ बिजयी भएका छन् भने वस्तुगततर्फको उपाध्यक्षमा उमेशलाल श्रेष्ठ विजयी भएका छन् । एशोसियटतर्फबाट भने चन्द्रप्रसाद ढकाल निर्बिरोध उपाध्यक्ष भएका छन् । चन्द्र ढकालले नेतृत्व गरेको कम्पनी चन्द्रागिरी हिल्स लिमिटेडले पनि जनता ठगीरहेको समाचार पटक पटक नेपाली मिडियामा सार्वजनिक भएका छन् । यसले उनको प्यानलमा धेरै जनता लुट्न पल्केका ठग र जनतामारा भएको सरोकारवालाहरुको तर्क छ ।
यसरी कोहि मोटरसाइकल बेचेर त कोहि केवलकार चलाएर जनता नै ठगीरहेकाहरु प्यानल नै बनाएर एफएनसीसीआइमा पुग्नुले एफएनसीसीआइलाइ ठग व्यवसायीहरुको संज्ञा दिइने डर भएको समेत सरोकारवालाहरुको आशंका छ ।
यस्तो छ गोल्छाको लुट कहानी